UClément Shala uvimba i-electro-brazier yabesifazane baseCongo - AFRIKHEPRI
UClément Shala uvimba i-electro-brazier yabesifazane baseCongo
Usuke usabela "UClément Shala uvimbela i-electro-brazier ye ..." Imizuzwana embalwa edlule
UClément Shala, waseCongo eDemocratic Republic of Congo (i-DRC) usethuthukise i-electro-brazier eyakha kusukela ezingxenyeni zokutakula. Injini yenziwe izingxenye ezitholwa ekhaseteti nasemidlalweni ye-CD. Le injini iqhuba umshayeli ovutha ukushisa kwama-embers, ngokwawo okwenziwe ngama-residu amalahle angawasebenzisi muntu. Injini inikwe amandla yi-2 amabhethri kagesi asetshenziswayo.
Kuze kube manje, iningi lamaCongo elipheka ngamalahle, ifulethi elibiza kakhulu iningi lamaCongo futhi ikakhulukazi elingavamile. Njengoba umbhali we-brazier ethi, ukuklama kwakhe kwenza kube lula ukunciphisa ukuwa kwemithi unyaka.
Okwamanje, usizo oluvela isimo Congolese weza ukhuthaze lokhu ukukhiqizwa umsunguli nezezimboni akuyona okuseduze ngaphandle Afrika futhi ikakhulukazi Diaspora izandla zabo emaphaketheni abo ukusiza lo mntwana abanesibindi Kemet (Africa). amakhophi eziningana braséro ngabe athengiswe ngaphandle ukukhangisa ngemali € 15 noma 9839,35 CFA francs ngenyanga amalahle ukuze Congolese isilinganiso.
Lo mbhalo sewabiwe izikhathi ezingama-80!